Microspheres Glass Reflective China Manufacturer
Description:Microspheres Glass Reflective,Glass Microspheres ho an'ny fanoratana lalana,Kitapo misy menamena
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Microspheres Glass Reflective
1. Voalohany hisafidianana ny fitaovana, ny kalitaon'ny fitaovam-pitsaboana dia mamaritra ny kalitao vita amin'ny fitaratra vita amin'ny ho avy. Ny fitaovana maitso dia tokony hadio ary tsy misy fahalotoana, miaraka amina tanjaka sy fahasahiranana.
2. Taorian'ny fisafidianana ny fitaratra, ny manaraka dia mamotika ireo solomaso.Ankoatra ny haben'ny ampahany dia mamaky ny fitaratra ho lasa glasy fanamainana mba hamonjena ny mpiasa sy ny loharano.
3. Mampiakatra ny masiram-bozaka maimbo ho 1200 ℃ fantsona fandrakofam-pahotana mba handrehitra izany, jereo ny kalitao sy ny hamafiny rehefa mamoaka.
4. Apetaho ny kofehy fitaratra vita amin'ny semi-vita mba hanamboarana azy.
5. Afangaroy ny labozia vita amin'ny lamba voavoatra araka ny ampahany.
6. Sakafo sy fanondranana.
Ny Chiye Glass Bead (Hebei) Co., Ltd, izay natsangana tamin'ny taona 1998, no lehibe indrindra sady mpamatsy angovo fitaratra ho an'ny fandinihana lalan-dàlana any Azia. Noho ny kalitao avoakan'ny vokatra sy ny serivisy, maherin'ny 80.000 taonina ny gorodona vita amin'ny gaza dia nitondra tany amin'ny firenena mihoatra ny efapolo sy faritra.
Ny orinasanay dia nanomboka ny ISO9001 ary nahazo ny taratasy CE, KS, JIS.
Microspheres Glass Reflective Glass Microspheres ho an'ny fanoratana lalana Kitapo misy menamena Ny Microspheres Glass Glass Reflective Screen Perles Glasses Reflective High Microspheres Glass Performance Beads Glass High Reflective Glass Microsphere Reflective Material